खाना पिक्सल जापानी Yuni Yoshida द्वारा बनाईएको क्रिएटिव अनलाइन
युनी योशिदा यो एक छ कला निर्देशक जापानी नागरिकताको। मात्र thirty thirty बर्षे उमेरमा उसले बजारमा क्रान्ति ल्यायो रचनात्मक दिमाग.
हामी अझै धेरै अन्य व्यक्तिहरूको बीचमा हाइलाइट गर्न चाहन्छौं, जापानी कला निर्देशक युनी योशिदाको काम, जसले एकको साथ सिर्जना गरेको हो असली श्रृंखला छविहरूको जुन खाना संग्रह भएको देखिन्छ म्यानुअल pixelated.
1 कलाकारको बारेमा बढि
2 उसको नयाँ श्रृंखला "Pixelated"
3 कलाकारको लक्ष्य
कलाकारको बारेमा बढि
जापानी युनी योशिदा विभिन्न मार्फत आफ्नो बाटो काम गर्नु अघि जोशिबी कला र डिजाइन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नुभयो विज्ञापन एजेन्सीहरू। तिनीहरूको सबै भन्दा राम्रो लग्रेस तिनीहरू प्रसिद्ध कला निर्देशक संग गए टाकुया ओनुकी.
उसको नयाँ श्रृंखला "Pixelated"
तपाईंले यस समयमा गर्नुभएको काम भएको छ pixelate खाना भागहरुत्यो हो, उसले आफूलाई समर्पण गरिसकेको छ विघटित खाना उनीहरूलाई रंगमा पिक्सल दिन। यसले डिजिटल दुबै संसारलाई एक बनाउँछ, त्यो खानाको डिजिटल संसारसँग, र तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा परिणाम बिल्कुलै हो प्रभावशाली र सजातीय.
यो नयाँ श्रृंखला शीर्षक भएको छ "पिक्सेलेटेड"। यद्यपि पहिलो नजरमा यो कम्प्युटरले गरेको हो जस्तो देखिन्छ, यो त्यस्तो छैन। सावधानीपूर्वक गयो तपाईंको आफ्नै खानाले क्युबहरू काट्ने र तिनीहरू रणनीतिक राखिएको छ इच्छित र color्ग प्रभाव प्राप्त गर्न। यो स्पष्ट छ कि यो एक हो धेरै नाजुक काम, ठूलो कठिनाईको र जसलाई धैर्य र पर्याप्त नब्ज आवश्यक छ।
कलाकार आफैंको अनुसार, उनले यी शब्दहरू साथ घोषणा गर्छिन् कि उनले दर्शकलाई भड्काउन खोजे: "म मान्छेले सोच्न, कुराहरु बिभिन्नै बनाउन र प्रेरित हुन चाहान्छ।"
यो कला निर्देशक उनलाई धन्यवाद विज्ञापन को दुनिया मा एक खुट्टा हासिल गर्न को लागी सफल भयो महान रचनात्मकता y उनको कामको उत्तेजना.
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने अधिक जान्नुहोस् Yoshida को बारे मा तपाईं आफ्नो कामहरु को लागी अधिक पाउन सक्नुहुन्छ वेबसाइट o इन्स्टाग्राम। तपाईं उसको सबैभन्दा उल्लेखनीय श्रृंखला भेट्टाउनुहुनेछ र यदि हामीलाई सत्यको केहि थाहा छ भने, त्यो हो तिनीहरूले तपाईंलाई उदासीन छोड्ने छैनन्.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » युनी योशिदा द्वारा फूड पिक्सल